Uchwepheshe we-Semalt: Ungamisa kanjani ukugaxekile kokudlulisa nge-Google Analytics Filters
Amabhizinisi e-inthanethi adinga ukukhiqizwa kwezimoto futhi zanda ukuguqulwabasinde emakethe. Kulesi simo, i-analytics idlala indima enkulu ekufinyeleleni i-high-value traffic kanye nokuguqulwa kwezinguquko. Amabhizinisingenhloso eyodwa yokukhiqiza izimoto kwiwebhusayithi yabo kufanele ibe nesilinganiso sokuthambekela kokutshela ukuthi yikuphi ukuguqulwa komgwaqo kuizinga eliphezulu. Ngokuyinhloko, amabhizinisi akhiqiza okuqukethwe ukuze ahlangabezane nezidingo zamakhasimende nezinkomba. Isizukulwane sokuqukethwe okusha nes original kungukuthinjalo ukugqugquzela uma kuziwa ekukhangiseni kokuqukethwe.
Izinkinga zingena lapho ukuthunyelwa kogaxekile, isitha se-analytics eshintsha ukuthi siyatholakalaidatha ithatha ukuhweba. Ukugaxekile kogaxekile kusebenza ukushintsha ukunemba kwedatha ngokuthungatha izinombolo ezibhalisiwe, cishetraffic. Ngenhlanhla, i-Google inesizathu sokuqinisekisa ukuthi amabhizinisi azama ukuphumelela ku-intanethi ahluleki.
Ubheke phambili ukuthola idatha enembile ye-B2B ne-B2C yakho eqinile? Michael Brown, the i-Semalt Umphathi Wempumelelo Yekhasimende, unikeza ukunakwa kwakho umhlahlandlela ozokusiza ukuba uhambe ngaphandle kokubhekana nezinkinga.
Ukuthathwa koReferrer ku-spam yokudlulisa
Kwabaqalayo abadinga izinto eziyisisekelo, u-referrer yiwebhusayithi ephumelele umaisivakashi sisuka ekhasini elilodwa lewebhu kuwe kwenye. Uma isivakashi sithola ukuchofoza isixhumanisi esivele esihlokweni esithize, isixhumanisi sizokwenzakukhonjiswe ku-Google Analytics njengomthombo wokudlulisela. Imithombo yokudluliselwa ngokuyinhloko isetshenziselwa ukudala ulwazi lokuthi kubaluleke kangakanani isixhumanisiku-website yebhizinisi..
Ulwazi mayelana nokuthunyelwa kogaxekile
Ugaxekile lokudlulisela phambili luyinhloko yezinhlobo ezimbili ezifaka:
Ugaxekile wokudlulisela umgwaqo
Lokhu kuyimfihlakalo yokufakela okukhohlisayo esebenzayo ngesisekelo sokukhohlisa. Ugaxekile usebenza nguukufaka igama lokudlulisela futhi unikeze igama elihle lokudala ithrafikhi futhi kuboniswe umbiko wakho we-Google Analytics. Ugaxekile wokudlulisela umgwaqo uyaqhubekaukuthumela izixhumanisi kusayithi lakho ukuqoqa izimoto eziningi. Noma kunjalo, igama elisetshenziselwa ukuxhunyelwa kogaxekile lihlale linamahloni futhi lingenakuziphatha ngendlela okwenzeka ngayoi-spam yokudluliselwa kofu.
Ugaxekile wokudlulisela umoya
I-spam yokudlulisela i-Ghost iqhutshwa kakhulu yi-marketer ye-digital engenzi kahleInhloso yokukhuthaza ikhasi elithile.
Ukuvimbela ugaxekile we-referrer usebenzisa i-Google Analytics
i-Google Analytics isebenza ukuvimbela kokubili ukugaxeka nokugwedluliswa kogaxekile kuningingendlela ephumelelayo. Ukuze uthole uhlu lwawo wonke ugaxekile wokudlulisela, iya ku-Google Analytics bese uchofoza ithebhu yokubika. Khetha uhlaka lwesikhathi wenaufuna bese ukhetha izilaleli, futhi ukwandise ukhetho lwenethiwekhi. Hamba ngokusebenzisa ama-hostnames futhi uqoqe wonke ama-hostname angavumelekile. Dalainkulumo evamile eyohlunga wonke ama-hostname angavumelekile nokudluliselwa ku-Google Analytics.
Abadayisi beDijimenti nabo bangavimbela ugaxekile wokudluliselwa ngokusebenzisa umthombo womkhankaso. Lokhuhhayi kuphela inketho ethembekile yokuvimbela ugaxekile wokudlulisela kodwa okulula. Kule nketho, omunye akenzi isihlungi segama lomsingeli, kodwa kunalokhoumthombo womkhankaso. Yenza umkhankaso ophumelelayo kuwebhusayithi yakho ngokubhekana nezinsongo ezinobungozi nokugaxekile okuthunyelwe ngempumelelo.